Manohitra ny Fitifiran’ny Polisy – sy ny Anganon’ny “Maodely Vitsy An’isa” Ireo FrankôShinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2017 13:28 GMT
Rindrina eny an-dalamben'i Paris. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr martathegoodone. CC BY-ND 2.0
Ity tantara avy amin'i Sophie Chou ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 11 Aprily 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanarahana fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Tsy vahiny amin'ny fanaovana fihetsiketseham-panoherana ny Frantsay. Niantso izany ho «fomban'ny Frantsay» mihitsy aza ny mpanao gazety iray.
Saingy rehefa namoy ny ainy nandritra ny fihaonana tamin'ny polisy ny lahy antitra iray, nipoaka ny fihetsiketsehana tao amin'ny vondrom-piarahamonina Frantsay-Shinoa tamin'ny voalohan'ny volana Avrily ho fanoherana ny herisetra sy fanavakavahana ara-poko ataon'ny polisy, fahatezerana ho an'ireo zatra mahita ity vondrona ity toy ny “maodely vitsy an'isa” tsy tia fifanandrinana.
“Gaga tanteraka tamin'ity fihetsiketsehana ity ny media, ary azoko lazaina hoe i Frantsa satria misy ny pikan-tsary mahazatra … momba ny vondrom-piarahamonina Aziatika, izay noheverina fa ‘maodely vitsy an'isa,’ mangingina tanteraka sy tsy mba manohitra ny manampahefana mihitsy,” hoy i Doan Bui, mpanao gazety ao amin'ny L'Obs, gazetibokim-baovao mpivoaka isan-kerinandro ao Frantsa.
Ho setrin'ny fahafatesan'i Liu Shaoyo, raim-pianakaviana 56 taona manan-janaka dimy, voatifitra sy novonoin'ny polisy Frantsay tao an-tranony tamin'ny 26 Martsa, nahazo fanandratam-peo vaovao ny Shinoa am-pielezana ao Frantsa. Mpanao fihetsiketsehana an-jatony avy amin'ny vondrom-piarahamonina Shinoa mpifindra monina no nitangorona tao Chinatown, tao amin'ny Lapan'ny Tanàna, Place de la République, ary ny Place de la Bastille ao Paris.
Fivorivoriana milamina ho an'i #LiuShaoyo. Tonga tsikelikely ny vahoaka. Eo amin'ny 500 eo amin'izao fotoana izao.
Hatramin'ny nahafatesan'i Liu, nisy ny tsy fifanarahana momba ny anton'ny nahafatesany.
Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao ireo zananivavy fa namoha varavarana niaraka tamin'ny hety nampiasainy hikarakarana trondro hanaovana ny sakafo harivan'ny fianakaviana izy. Nilaza ny polisy fa nitam-piadiana i Liu ka nitifitra hiarovan-tena izy ireo
Nilaza i Leo Takeuchi, mpitondra teny sy mpikarakara vondrom-piarahamonina ao amin'ny fikambanana Asia2.0 manohitra ny fanavakavahana fa matoky izy fa noho ny fanavakavaham-poko no anton'ny fitifirana .
“Raha lehilahy fotsy hoditra izy, tao an-tranony, mety niandry ny polisy ary niezaka hiresaka alohan'ny hitifirana,” hoy Takeuchi, 25 taona.
Nilaza i Takeuchi fa manantena izy fa afaka mitambatra manoloana ny fahafatesan'i Shaoyo sy hiady tsy amin'ny herisetran'ny polisy ihany fa amin'ny fampijaliana mahazo matetika ny Aziatika ao Frantsa ny vondrom-piarahamonina Aziatika any Frantsa .
“Zava-doza ny fitifirana, saingy ny rafitra fanavakavaham-bolonkoditra no tena mampanahy kokoa, “hoy Takeuchi.
Fiaingàna avy tamin'ny fihetsiketsehana hafa vao haingana nataon'ny vondrom-piarahamonina Shinoa, izay nangataka fiarovana bebe kokoa avy amin'ny polisy Frantsay ny fihetsiketsehana.
Nilaza ireo Shinoa sy ny Frankôshinoa-Pariziana fa matetika lasibatry ny herisetra noho ny antony fanavakavaham-poko izy ireo, mifototra amin'ny fitsaratsaram-poana ny Aziatika ho lasibatra mora foana hanaovana heloka bevava.
Tamin'ny volana Aogositra 2016, namoy ny ainy i Zhang Chaolin, 49 taona, mpanjaitra rehefa voaroba sy nodarohan'ireo tanora telo tao amin'ny tanàna manodidina an'i Aubervilliers.
Saingy ny hetsi-panoherana tamin'ny fiandohan'ny volana Aprily dia nahitana marika fitakiana ny rariny sy miampanga ny polisy amin'ny herisetra. Nisy ny nilaza hoe “polisy kolonialista,” izay midika hoe “polisy mpanjanaka.”
Manana Shinoa mpifindra-monina marobe noho ny firenena hafa ao Eoropa i Frantsa, saingy tsy misy ny tahiry ofisialy momba ny fahabetsahan'ny mponina na ny heloka bevava mihatra amin'izy ireo. Noho ny lalàna Frantsay no anton'izany, tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny manangona tahiry momba ny firazanana sy ny foko.
Tombanan'ny manam-pahaizana ho eo amin'ny 500.000 na 600.000 eo ny isan'ny vondrom-piarahamonina Shinoa mpifindra monina ao Frantsa, monina ao Paris ny ankamaroany. Ity no vondrona Aziatika betsaka ao Frantsa, arahin'ireo avy any ampielezan'ny firenena zanatany Frantsay teo aloha toa an'i Vietnam, Laos, ary Kambodza.
Mety afaka miloa-peo bebe kokoa ny vondrom-piarahamonina Shinoa-Frantsay, saingy mbola miady mafy ry zareo ny horenesina. Nilaza i Bui sy Liu Takeuchi fa tsy mba noraharahian'ny manampahefana eo an-toerana mihitsy ny fahafatesan'i Liu sy ny hetsi-panoherana taorian'izany, na dia eo aza ny fifidianana filoham-pirenena atsy ho atsy, izay ny fifindramonina no lohahevitra voalohany iadian-kevitra.
“Tsy nisy mpanao politika, afa-tsy iray ihany angamba, niresaka momba ny zava-nitranga [nahazo an'i Liu],” hoy Bui.
Taorian'ny fahafatesan'i i Liu, naneho hevitra momba ny fitongilanan'ny polisy i Dominique Sopo, filohan'ny fikambanana Frantsay manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra na SOS Racisme – saingy nahitana filazana izay tsapan'ny sasany fa nanana fijery fitsaratsaram-poana ara-poko ny fanambarany.
“Tsara kokoa raha tsy afangaron'ny polisy ny raim-pianakaviana Shinoa mpahandro hanina sy ny yakuza Japoney mitam-piadiana sy miezaka manafika azy ireo,” hoy i Sopo tamin'ny fanambarana ofisialy tamin'ny 28 Martsa.
Tamin'ny fanarahamaso ny mailaka ho an'ny PRI, nanazava i Sopo fa ny andian-teny dia midika hoe: “mampiseho ny fanakiananay ny fitsarana an-tendrony.”
“Miahiahy izahay fa miasa miaraka amin'ny fitsarana an-tendrony goavana ny polisy, izany no niniavan'ny fikambananay mpilatsaka an-tsitrapo manafangaro ireo raim-pianakaviana Shinoa amin'ny yakuza Japoney mitam-piadiana, mba hampisehoana ny faharatsian'ny fitsaratsaram-poana izay mety mihatra amin'ny mponina,” hoy Sopo.
Nilaza i Takeuchi fa nahita ny fanambarana avy amin'ny SOS Racisme ho mandiso fanantenana, ary nilaza kely ny firaisankina avy amin'ireo fikambanana hafa.
“Mahatsiaro ho somary very izahay, fa na dia ny fikambanana iray tena malaza aza dia manisy sira amin'ny zava-misy koa,” hoy i Takeuchi.
Fivorivoriana ho an'i #LiuShaoyo ao amin'ny [Place de la] République. Eo amin'ny olona 300 no nivorivory am-pahanginana. #FahafatesaniLiuShaoyo
Iray amin'ireo sarotra indrindra momba ny fiadiana amin'ny fanavakavaham-bolokoditra mihatra amin'ny Aziaka ao Frantsa hoy i Takeuchi dia ny fitsarana an-tendrony amin'ny endriny roa. Misy ny fitsaratsaram-poana amin'ny lafiny tsara mikasika ny Aziatika, mifototra amin'ny fomba fijery “maodely vitsy an'isa”, sy ny lafiny ratsy.
“Miatrika toe-javatra sarotra indrindra mety misy izahay. Tsy maintsy miady amin'io lafiny tsara io izahay … ary tsy toerana mety ho an'ny fikambananay eto Frantsa izany, “hoy Takeuchi.
Nilaza i Bui fa nandritra ny fotoana, niha sahisahy kokoa sy niloa-bava kokoa amin'ny fitakian'izy ireo ny Shinoa mpanao fihetsiketsehana, tarihin'ny zandriny indrindra, taranaka Frantsay, izay te handrava ny marika maodely vitsy an'isa.
“Tamin'ny fihetsiketsehana voalohany [taorian'ny nahafatesan'i Chaolin], nitazona sainam-pirenena frantsay ny rehetra,” hoy izy. “Ary ny fanehoan-kevitra rehetra tamin'izany dia milaza fa mpanao fihetsiketsehana tena mahafinaritra izy ireo, mpifindra monina mahafinaritra izy ireo. Na dia manao fihetsiketsehana aza izy ireo, dia manao fihetsiketsehana tsara.”
Saingy tsy miraharaha intsony izany laza izany ny tanora, hoy i Bui .
“Amin'izao fotoana izao, ny tanora izay teraka tao Frantsa, dia leo tanteraka amin'ity tsy fahitana azy ireo ity,” hoy i Bui. “Tsy te-ho maodely vitsy an'isa izy ireo na inona na inona, te ho Frantsay fotsiny izy ireo.”
2 herinandro izayEspaina
2 herinandro izayPaortiogaly
Mey 2021 28 Lahatsoratra